UZuma uzokwamukelwa ngemicimbi eNkandla
Bahlela idili lomcimbi wokwamukela owayengumengameli wakuleli, uJacob Zuma, okhishwe ejele ngoshwele wokugula. Isithombe: Doctor Ngcobo/Africannewsagency(ANA)
African News Agency | September 14, 2021
ABALANDELI bowayengumengameli wakuleli, uJacob Zuma, okhishwe ejele ngoshwele wokugula, bahlele ukumamukela ekhaya ngedili lomcimbi.
Ukumemezela kwabo lo mcimbi kulandele isimemezelo senhlangano i-Ahmed Kathrada Foundation, ethe ukudedelwa kukaZuma kumele kukhombise ukuthi kwenziwe ukubulungiswa ukuze kungeke kubonakale sengathi kuthanjiswe umthetho ukuze enzelelwe.
I-DA yona iluyise enkantolo udaba ukuze kucutshungulwe isinqumo sikaKhomishana wamaJele, uMnuz Arthur Fraser, ukuthi bekufanele yini ukuba adedelwe?
Abe-AfriForum nabo bafuna uFrazer ukuba abachazele ukuthi kwenzeke kanjani ukuba uZuma adedelwe engakaqedi isigwebo sakhe sezinyanga ezingu-15, ngecala lokudelela umyalelo weNkantolo yoMthethosisekelo?
Konke lokhu ukukhalaza akubaqedi moya abalandeli baZuma abathi bamlindele ekhaya eNkandla ukuba bemamukele uma efika.
Okhulumela inhlangano emisiwe, uMkhonto weSizwe Military Veterans Association (MKMVA), uMnuz Carl Niehaus, uthe bazolokhu bebheka nje ukuthi uZuma ubuya nini ekhaya.
“Siyazi ukuthi amanye amalungu ethu akubheke ngabomvu ukuba uZuma abuye ekhaya. Asigudluki ekutheni siyameseka uZuma ekutholeni kwakhe ushwele. Sizokwenza izinhlelo ukuba simamukele ekhaya uma esefika,” kusho uNiehaus.
Akukacaci ukuthi uZuma uzobuya nini ekhaya lakhe eliseNkandla.
Ngokuthola kwe-Independent Media, uZuma usagcinwe esibhedlela samasosha eTshwane, lapho esalashwa khona kuze kube kuphela lenyanga. OweRadical Economic Transformation Champion (RET), uSihlalo uMnuz Nkosentsha Shezi, uthe izinhlelo zokwamukela uZuma zizokwenziwa yiMKMVA.
“Sizosebenza ndawonye ukuhlela umcimbi wokumamukela ekhaya uZuma. Sizokwenza njengoba sihlezi senza ukuba sihlele ngokuhlanganyela izinhlelo zokweseka uZuma,” kusho uShezi.
Abamabanda ahlangene e-KZN ngaphansi kobuholi bamfundisi uMbhishobhu uVusi Dube webandla i-EThekwini Community Church (ECC), bazoya kohambisela uZuma nomndeni wakhe umkhuleko eNkandla.
Ngenyanga edlule, abamabandla ahlangene bahambisa umkhuleko eNkandla, bekhulekela ukuba uZuma asinde njengoba wayengeniswe esibhedlela.
UDube uthe bazonikeza umndeni kaZuma ithuba ukuba benze imicimbi yosiko bese bebavakashela ukumhambisela umkhuleko.